चीन बाहिरी पर्खाल रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > पानी आधारित रंग > बाहिरी भित्ता पेन्ट
बाहिरी भित्ता पेन्ट निर्माताहरु
बाहिरी भित्ता रंग को मुख्य कार्य सजाउन र भवन को बाहिरी पर्खाल को रक्षा गर्न को लागी, भवन को उपस्थिति सफा र सुन्दर बनाउन को लागी हो, ताकि शहरी वातावरण को सौन्दर्य को उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी। एकै समयमा, यो भवन को बाहिरी पर्खाल को रक्षा र यसको उपयोग समय विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
बाहिरी पर्खाल रंग धनी र विविध रंग, राम्रो रंग प्रतिधारण छ, एक लामो समय को लागी राम्रो सजावट, राम्रो पानी प्रतिरोध र मौसम प्रतिरोध को बनाए राख्न, र पाउडर र फीका गर्न को लागी सजिलो छैन। किनभने बाहिरी पर्खाल कोटिंग्स भवनहरु को मुखौटा मा प्रयोग गरीन्छ, बाहिरी पर्खाल कोटिंग्स को पराबैंगनी प्रकाश को प्रतिरोध को क्षमता अन्य कोटिंग्स को तुलना मा धेरै उच्च छ, र रंग परिवर्तन बिना एक लामो समय को लागी सूर्य को प्रकाश को लागी उजागर गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, बाहिरी पर्खाल कोटिंग्स पनि हावा पारगम्यता, प्रदूषण प्रतिरोध, फफूंदी प्रतिरोध र क्षार प्रतिरोध छ।
बाहिरी पर्खाल रंगहरु व्यापक रूप मा बिभिन्न औद्योगिक बिरुवाहरु मा प्रयोग गरीन्छ, सफा गर्न गाह्रो छ कि उच्च अन्त वाणिज्यिक भवनहरु को दीर्घकालीन सुरक्षा को आवश्यकता छ, साथै सजावट र सुरक्षा को लागी उच्च मौसम प्रतिरोध र दाग प्रतिरोध, विशेष गरी उष्णकटिबंधीय बलियो पराबैंगनी वातावरण को लागी उपयुक्त छ। , उच्च प्रदूषण वातावरण र तटीय उच्च आर्द्रता वातावरण।
लोचदार विरोधी क्रैकिंग बाहिरी भित्ता रंग एक्रिलिक लोचदार पायस, मौसम र pig्ग र सहायक मौसम, उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध, प्रकाश र रंग प्रतिधारण संग बनेको छ।
चीन मा एक पेशेवर बाहिरी भित्ता पेन्ट निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ बाहिरी भित्ता पेन्ट। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक बाहिरी भित्ता पेन्ट लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।